ezaposwa ngomhla 05 / 11 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo LGD-2226.
Ukusetyenziswa kwepowder ye-4.LGD-2226
7.LGD-2226 powder I-Recipe-iikhompawundi kunye nokwenziwa
I-8.LGD-2226 powder- Uvavanyo loomatshini
I-10.LGD-2226 powder-zangaphambi kweklinikhi
12. Umbuzo Wokuthenga i-LGD-2226 powder
Ifomula yeMolekyuli: C14H9F9N2O
Ubunzima Ezinto: 392.219g
I-LGD-2226 powder yi-SARM yomlomo engasebenziyo ebonakaliswe ukwandisa ubunzima bemisipha, ukuqinisa amathambo, kunye nokuphucula ukusebenza ngokwesondo kwiigundane zesilisa ngaphandle kokuchaphazela ubukhulu beprostate. , Abaphandi bafumanise ukuba i-LGD-4 powder yathintela ukulahleka kwethambo kunye nokugcinwa kwethambo ngeendlela ezimbini-zonyusa inqanaba lokwakheka kwethambo kunye nokunciphisa izinga lokubuya kwethambo.
Uninzi lwamanye amayeza kunye nokhetho lonyango lujolise kuphela kwenye yeendlela. Olu pho nonongo luqinisekisile ukufunyaniswa kwezifundo zangaphambili ukuba le nxalenye yandisa ubunzima be-muscle kunye ne-libido.
Akukho phando lukhulu kule SARM, kodwa ngenxa yezibonelelo eziqwalaselweyo, zinokuhlelwa njenge-anabolic SARM efanelekileyo kunye nesibonelelo esongeziweyo sokuphucula ukusebenza ngokwesondo. Olunye uphando luyafuneka kweli khompawundi kwiimodeli ezingezizo ezomntu kunye nabantu.
Ukungcola > 98% (okanye bhekisa kwiSatifikethi soHlalutyo)
Beka ubomi kwishelufa > Iminyaka emi-2 ukuba igcinwe kakuhle
Isitoreji seStock Solution 0 - 4 C ixesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki), okanye -20 C ixesha elide (iinyanga).
yoGcino Imeko Okomileyo, omnyama kunye no-0 ukuya ku-4 C okwexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -20 C ixesha elide (iinyanga ukuya kwiminyaka).
Inokunceda ekuphuculeni ukuxinana kwethambo kubantu abadala. Abo baneemeko zethambo, banokufumana inzuzo ngokulula kwi-LGD-2226 powder cycles.
I-androgen receptor (AR) yi-ligand-inducible steroid hormone receptor elamla inyathelo le-androgen, ukumisela i-phenotypes zesini zesini kunye nokukhuthaza i-spermatogenesis. Njengoko ii-androgens zidlala eyona ndima iphambili kuphuhliso lwesini kunye nokusebenza, ii-agonists ze-steroidal androgen zisetyenziswe ekliniki iminyaka ethile. Nangona kunjalo, kukho umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho kwaye uninzi lwee-androgens ze-steroidal azinakufakwa ngomlomo, nto leyo ethintela ukusetyenziswa kwezi zinto. I-1,2, i-Dihydro, i-6, i-N, i-N-bis (i-2,2,2, i-trifluoroethyl) i-amino, i-4, i-trifluoromethyl-i-2-i-quinolinone (i-LGD-2226 powder) yinto ye-nonsteroidal ligand kunye ne-modulator ekhethiweyo ye-AR. Ubume be-crystal yesakhiwo se-LGD-2226 powder kunye ne-androgen receptor ligand-binding domain (AR LBD) kwi-2.1 Å isonjululwe kwaye ithelekiswa nesakhiwo se-AR LBD-R1881. Kuyathenjwa ukuba oku kuyakunceda ekuchazeni ngakumbi ukukhetha kwe-LGD-2226 powder ebonwa kwi-vitro nakwi-vivo assays nasekuphuhliseni iiarhente zonyango ezikhethiweyo nezisebenzayo.
· Ukunyamezela kunye nokuBekwa kwimeko- Zonke ii-SARMS zangaphambi kweklinikhi kufuneka zibe nenqanaba lesiphumo esifanelekileyo kunyamezelo lwemisipha kunye nokomelela komzimba. Inqanaba lokusebenza kwezi meko lixhomekeke kwi-SARM ekuthethwa ngayo kwaye idatha ayihambelani ekubaleni iziphumo zizonke.
I-LGD-2226 powder okwangoku ayimiselwanga ngokusemthethweni njengechiza. Abaphuhlisi basalungisa izinto ezimbalwa. Uvavanyo lwezonyango luyaqhubeka kodwa kuyakuthatha ixesha ngaphambi kokuba lwenziwe kwaye luthuli. Ungathenga kuphela le SARM kubathengisi abancinci be-Intanethi-AASraw.
Nantsi ingcebiso enokuthenjwa- I-AASraw, enkulu ekunikezeleni ngomgubo ophezulu we-sarm powder.Ukubonelela nge-AASraw kumgangatho ophezulu we-LGD-2226 powder kunye nobunyulu abukho ngaphantsi kwe-98%. I-LGD-2226 powder yokuthengisa njengalandelayo:
I-AASraw's min order ye-10g, Ungathumela i-odolo yokunikezelwa yiwebhusayithi yethu: www.aasraw.com.
Thenga i-YK11 Powder- Uphononongo kunye neziBonelelo kunye neMiphumo emibi 丨 AASraw
I-CDP yeCholine Powder: Uphengululo kunye neziBonelelo kunye neZiphumo eziNgekho-I-Nootropics echanekileyo I-Nootropics Enhle ye-Aniracetam Powder yokuphuculwa kwengqondo